Mkpughe 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
8 Mgbe o meghere+ nke asaa n’ime ihe ndị ahụ a kara akara,+ eluigwe dara jụụ ruo ihe dị ka ọkara otu awa. 2 M wee hụ ndị mmụọ ozi asaa+ ndị guzo n’ihu Chineke, e nyekwara ha opi asaa. 3 Mmụọ ozi ọzọ wee bịarute ma guzo n’ebe ịchụàjà,+ o ji arịa ọlaedo nke a na-etinye ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ; e nyekwara ya ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ+ dị ukwuu ka o suree ya n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà e ji ọlaedo rụọ, nke dị n’ihu ocheeze ahụ, mgbe a nụrụ ekpere ndị nsọ niile. 4 Anwụrụ ọkụ nke ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ nke si n’aka mmụọ ozi ahụ wee soro ekpere+ ndị nsọ rịgoo n’ihu Chineke. 5 Ma ozugbo ahụ, mmụọ ozi ahụ weere arịa ahụ a na-etinye ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ wee gụjuo ya ọkụ+ nke si n’ebe ịchụàjà ahụ ma wụda ya n’ụwa.+ Égbè eluigwe+ wee gbaa, a nụkwara olu, àmụ̀mà+ gburu, ala ọma jijiji+ mekwara. 6 Ndị mmụọ ozi asaa ahụ ndị ji opi+ asaa+ ahụ wee jikere ịfụ ha. 7 Mmụọ ozi nke mbụ wee fụọ opi ya. E wee nwee akụ́ mmiri ígwé na ọkụ+ a gwakọtara ha na ọbara, a wụdakwara ya n’ụwa; e wee suo otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ụwa ọkụ,+ suokwa otu ụzọ n’ụzọ atọ nke osisi ọkụ, suokwa ahịhịa ndụ+ niile ọkụ. 8 Mmụọ ozi nke abụọ wee fụọ opi ya. E wee tụba ihe yiri oké ugwu+ na-ere ọkụ n’ime oké osimiri.+ Otu ụzọ n’ụzọ atọ nke oké osimiri wee ghọọ ọbara;+ 9 otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ihe e kere eke ndị dị n’oké osimiri, bụ́ ndị nwere mkpụrụ obi, nwụkwara,+ e mekwara ka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ụgbọ mmiri kpuo. 10 Mmụọ ozi nke atọ wee fụọ opi ya. Otu kpakpando ukwu nke na-enwu dị ka oriọna wee si n’eluigwe daa,+ ọ dakwara n’elu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke osimiri nakwa n’elu isi mmiri dị iche iche.+ 11 Aha kpakpando ahụ bụ Ahịhịa Ilu. Otu ụzọ n’ụzọ atọ nke mmiri ghọkwara ahịhịa ilu, mmiri ndị ahụ gbukwara ọtụtụ mmadụ, n’ihi na e mere ka ha na-elu ilu.+ 12 Mmụọ ozi nke anọ wee fụọ opi ya. E wee tie otu ụzọ n’ụzọ atọ nke anyanwụ ihe, tiekwa otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ọnwa na otu ụzọ n’ụzọ atọ nke kpakpando, ka otu ụzọ n’ụzọ atọ ha wee gbaa ọchịchịrị,+ ka otu ụzọ n’ụzọ atọ+ nke ehihie wee gharakwa inwe ìhè, ka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke abalị gharakwa inwe ìhè. 13 M wee hụ, nụkwa ka otu ugo+ nke na-efe n’etiti eluigwe+ ji oké olu kwuo, sị: “Ahụhụ, ahụhụ, ahụhụ+ ga-adịrị ndị bi n’elu ụwa n’ihi oké ụda nke opi ndị fọdụrụ nke mmụọ ozi atọ ahụ, bụ́ ndị chọrọ ịfụ opi ha!”+